काठमाडौं, २० मंसिर : उत्तरायणको समयमा योगीहरूले आफ्नो आध्यात्मिक प्रक्रियातर्फ केही नयाँ प्रयासहरू गर्छन्, किनकि उत्तरायण भनेको कृपा र बद्धत्त्वको समय हो । प्राचीन समयदेखि नै थुप्रैले होशपूर्वक आफ्नो शरीर छोड्नको लागि विशेषगरी यो समयलाई रोज्ने गरेका छन् । यसको एउटा प्रख्यात उदाहरण भिष्म हुन्, जसले उत्तरायण सुरु नहुन्जेलसम्म युद्ध मैदानमा वाणहरूको शैय्यामा मृत्यु पर्खेर बसेका थिए । र, उत्तरायणको पहिलो पूर्णिमाको दिनमा नै विज्जीले महासमाधि प्राप्त गरेकी थिइन् ।
सम भनेको समान वा निष्पक्ष हो । धि भनेको बुद्धि हो । समाधि भनेको "समबुद्धि" हो, अर्थात् सबैथोक निष्पक्ष भएर हेर्ने बुद्धि । यस्तो बुद्धिले असल र खराब, उच्च र निच, हर्ष र पीडा, सुख र दुःखमा कुनै भेदभाव गर्दैन । महासमाधि भनेको समबुद्धिको सर्वोच्च स्तर हो, जहाँ बुद्धिको समभाव सबैभन्दा उच्च हुन्छ- अर्थात्, यस्तो बुद्धि जसले बाहिरबाट ग्रहण गरेको सबैथोक हराएको हुन्छ ।
तपाईंको स्मृतिमा जे-जति छन्, ती पूर्वाग्रही तरिकाले सङ्ग्रह गरिएका हुन्- जस्तै कि 'मलाई यो व्यक्ति मन पर्छ, त्यो व्यक्ति मन पर्दैन; ऊ असल व्यक्ति हो, ऊ खराब व्यक्ति हो; यो एकदमै ठीक छ, त्यो एकदमै बठीक छ ।' यी सबै निष्कर्ष र पूर्वाग्रहहरू त्यही स्मृतिको परिणाम हुन् । तपाईं सबैथोकलाई असल र खराब, मन पर्ने र मन नपर्ने, उच्च र निच, भगवान र राक्षस भनेर विभाजन गरिरहनु भएको हुन्छ ।
तर, जुन कुराले तपाईंको स्मृतिलाई मेटाउँछ, त्यसमा तपाईं निश्चित उद्देश्यको लागि बाँधिनुभयो भने, त्यो उचित हुनेछ । केही सुरु गर्नको लागि यसरी बाँधिनु राम्रो हुनेछ, किनकि यसले तपाईं र तपाईंको विगतबीच दुरी बनाउँछ । ब्रह्मचर्य वा सन्यास भनेको नै यही हो, अर्थात् तपाईं आफूलाई आफ्नो स्मृतिबाट विच्छेद गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईं समबुद्धि चाहनुहुन्छ- यस्तो बुद्धि जसले कुनै भेदभाव गर्दैन ।
तपाईंमा यसप्रति गहिरो चाहना हुँदैमा महासमाधि प्राप्त हुँदैन । यो तबमात्र प्राप्त हुन्छ, जब तपाईं आफूलाई आफ्नो स्मृतिबाट विच्छेद गर्नुहुन्छ- अर्थात्, तपाईं आजलाई आज जसरी नै बाँच्नुहुन्छ, न कि विगतमा जम्मा गरिएका वाहियात् चीजहरूको सङ्ग्रहको रूपमा । हामीले तपाईंहरूलाई त्यसको निम्ति विधि र प्रक्रियाहरू सिकाइ सकेका छौँ । शाम्भवी महामुद्रा जस्तो सरल अभ्यासले समेत तपाईंलाई त्यस स्थितिमा पुऱ्याउन सक्छ । त्यसको निम्ति तपाईंले सही माहोल सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंलाई अरू केही पनि चाहिँदैन ।
'ए ! थुप्रै कुराहरू फेरिएका छन्" भनेर तपाईं आफूलाई मूर्ख बनाउन त सक्नुहोला, तर वास्तवमा केही पनि बदिलिएको हुँदैन । तपाईं जहीँको त्यहीँ रहनुहुन्छ, किनकि तपाईं स्मृतिको भण्डारमा बाँधिनुभएको छ । यस संस्कृतिमा मानिसहरूले 'हत्तेरी कर्म !' भनेर भन्ने गर्दथे । हत्तेरी कर्म भनेको के हो भने, तपाईं जतिखेर पनि यो स्मृतिको भारी घिसारेर हिँडिरहनु भएको हुन्छ, तर तपाईं मुक्त हुन चाहनुहुन्छ । यदि मैले 'ल, जाऔँ !' भनेँ भने, तपाईं सोध्नुहुन्छ, ' अनि, मेरो भारी नि !' यही भारी नै बन्धन हो । तपाईंलाई अरू कुनै पनि कुराले बाँधिरहेको छैन ।
स्मृतिको भारीलाई बिसाउनु होस् । बिहान उठ्नुहोस्, भर्खरै उदाएको सूर्य नवीन हुन्छ, हावा पनि ताजा र स्वच्छ हुन्छ, सबैथोक नयाँ हुन्छ- यी सबैलाई त्यही रूपमा अनुभव गर्नुहोस् । त्यसपछि, तपाईंलाई सिकाइएको सरल क्रियालाई आफूले सकेजति पूरै संलग्न भई साथै त्यसमा समर्पित भई अभ्यास गर्नुहोस् । जब यहाँबाट जाने समय आउँछ, म यो सुनिश्चित गर्नेछु कि तपाईं यहाँबाट राम्रोसँग जानुहुनेछ । यो एउटा वाचा हो ।
यति त तपाईंले गर्नैपर्छ, किनकि तपाईं जुन काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यति पनि गर्नुहुन्न भने, म कसरी तपाईंलाई मद्दत गरूँ ? यदि तपाईंले आफूले सक्नुभएको सबैथोक गर्नुभयो भने, केही निश्चित कुराहरू छन्, जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्न- किनकि ती कुराहरू तपाईंको अनुभवमा छैनन् । ती कुराहरू म तपाईंको निम्ति शत-प्रतिशत गर्नेछु !
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २०, २०७८, ०७:४५:००